बूढानीलकण्ठ मन्दिरको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ | .:: Welcome || Paryatannews
Home » समाचार » बूढानीलकण्ठ मन्दिरको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ
काठमाडौँ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बूढानीलकण्ठ मन्दिर परिसरको भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ ।
पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको हो । विसं २०७२ को भूकम्पका कारण मन्दिर परिसरका धर्मशाला, शिव मन्दिर, सरस्वती मन्दिर तथा पर्खाल पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । पुनःनिर्माणका लागि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले रु २० करोड लागत प्रस्तावसहित नगरपालिकामा प्रस्ताव पठाएको भए पनि बजेट निकासा नभएको मन्दिरका मठाधीश स्वामी निगमानन्दले बताउनुभयो ।
बूढानीलकण्ठ नगरपालिका प्रमुख उद्धवप्रसाद खरेलले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले बजेट निकासा नगरेको हुँदा मन्दिरलाई रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बताउनुभयो । बूढानीलकण्ठ मन्दिरमा शेषनागमाथि विष्णुको पूर्ण कदको मूर्ति शयन गरेको देख्न सकिन्छ । उक्त मूर्ति लिच्छवि राजा विष्णु गुप्ताका पालामा विक्रम संवत् ६९७ मा बनेको शिलालेखमा उल्लेख छ ।
बूढानीलकण्ठको प्रस्तरमूर्ति बाइस फिट लम्बा र १२ फिट चौडाको छ । नेपाली प्रस्तरमूर्तिमा यसभन्दा ठूलो अर्को मूर्ति छ्रैन । नारायण अर्थात् विष्णु क्षीर सागरमा रहेको कल्पना गरिएको सो मूर्ति शेषनागका पाशमा शय्या गरी शेषनागकै एघार शिरबाट सुरक्षित भई शङ्ख, चक्र, गदा र पद्म हातमा बोकेर आनन्द र शान्त स्वरुपमा शयन गरिरहेको देखिन्छ । ऐतिहासिक महत्वको उक्त मन्दिरमा काठमाडौँ उपत्यका तथा त्यस आसपास क्षेत्रबाट भतmजन आउने गर्छन् । उतm मन्दिरमा विशेष गरी हरिबोधिनी एकादशी र हरिशयनी एकादशीका दिन विशेष मेला लाग्छ । त्यस समयमा उक्त मन्दिरमा दर्शन गरी मेला भर्नाले पारिवारिक सुख शान्ति तथा समृद्धि प्राप्त हुने जनविश्वास छ ।
बूढानीलकण्ठ मन्दिरको पुनःनिर्माणमा ढिलाइ Reviewed by Shiva Shrestha on Jan 04 . काठमाडौँ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बूढानीलकण्ठ मन्दिर परिसरको भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको हो काठमाडौँ । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त बूढानीलकण्ठ मन्दिर परिसरको भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको छ । पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा पुनःनिर्माणमा ढिलाइ भएको हो Rating: 0